Madaxweyne Erdogan oo si kulul kaga hadlay xasuuqa Muslimiinta Myanmar | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Caalamka Madaxweyne Erdogan oo si kulul kaga hadlay xasuuqa Muslimiinta Myanmar
Madaxweyne Erdogan oo si kulul kaga hadlay xasuuqa Muslimiinta Myanmar
Madaxweynaha Wadanka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa markale si kulul kaga hadlay dhibaatada baahsan ee loo gaysanayo Muslimiinta Wadanka Myanmar (Burma).
Warbaahinta dunida, ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay soo bandhigaysay muuqaalo argagax badan, oo muujinaya dad isugu jira carruur, haween iyo waayeelba oo la gubayo, qaarkoodna jirdil lagula kacayo. Muuqaaladan waxaa kaloo lagu arkay guryaha dadkaasi oo la burburinayo, dabna la qabadsiinayo.
Dadkan oo lagula kacay fuquuq diimeed iyo mid siyaasadeedba, ayaa waxaa bartamihii bishii hore dhacday in Ciidamada Militariga Myanmar ay gudaha u galaan Gobolka Muslimiinta Rohingya ay degan yihiin oo lagu magacaabo Rakhine State. Ciidamadu waxay gobolkaasi ka gaysteen xasuuq dad maato ahi lagula kacay, iyagoona dab qabadsiiyay guryahoodii. Tani waxay soo dedejisay inay Muslimiinta Rohingya u cararaan Wadamada Bangladesh iyo Thailand oo deris la ah Myanmar.
Madaxweynaha Turkiga, ayaa si adag u sheegay in arrintani ay tahay wax aan indhaha laga daboolan karin, isla-markaana uu dalkiisu diyaar u yahay taageeridda Muslimiinta Myanmar.
Madaxweynaha, ayaa hoosta ka xariiqay in xasuuq uu ka soconayo Myanmar, kuwa iska dhiga inay ku dhaqmaan dimoqraadiyadda, balse indhaha ka sii jeediyay, ay qayb ka yihiin xasuuqa dalkaasi ka jira.
“Xasuuq ayaa Myanmar ka jira, kuwa indhaha ka qarsanaya xasuuqa halkaasi ka jira misena iska dhigaya inay ku dhaqmeen nidaamka dimoqraadiyadda, iyaguna qayb bay ka yihiin, waana in wax laga qabtaa.” Ayuu yiri Madaxweyne Erdogan.
Qaramada Midoobe, ayaa waxay sheegtay in Muslimiin ay tiradoodu ka badan tahay rubac malyuun ay gaareen Bangladesh, iyagoo dhinaca badda ka gelaaya.
Hogaamiyaha xisbiga talada dalkaasi haya, haweeneyda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi, ayaa Warbaahinta u sheegtay inaanay dhibaatadani ahayn mid ku kooban Muslimiinta oo keliya, ha yeeshee ay tahay dhibaato laga dhaxlay mudadii dheereed uu dalkaasi ka arriminayay maamulkii keli taliska ahaa. Waxay sheegtay in uu waajib ka saaran yahay inay sugto nabadgelyada dhammaanba dadka dalkaasi ku nool, inkastoo sida ay sheegtay aanay haysan dhaqaalo in ku filan.
Dunida Muslimka, ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay iska indho tirayan xasuuqa lagu hayo Muslimiinta Myanmar, waxaadna arkeysaa inay cambaareynayan madax aan Muslimiin ahayn.
Previous articleGaariga Gudoomiye Ku xigeenka Dharkiinley oo lagu weeraray Muqdisho
Next articleKulankii Baarlamaanka ee looga hadli lahaa arrinta Qalbi Dhagax oo kooram la’aan u baaqday